Dogecoin, alt ရာသီအတွက် ဦး ဆောင်ညွှန်ကိန်း? - Token Myanmar
Dogecoin, alt ရာသီအတွက် ဦး ဆောင်ညွှန်ကိန်း?
Dogecoin (ခွေးအထူးသဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးသောကြောင့်၎င်းသည်တည်ရှိမှုအရှိဆုံး cryptocurrencies တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုရှိသည့်ငွေစက္ကူသည်၎င်း၏တန်ဖိုးသေးငယ်မှုနှင့်စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့်စျေးနှုန်းချိုသာသည့်ပန့်များနှင့်ချက်ချင်းအဓိပ္ပါယ်တူဖြစ်လာသည်။
သင်မေ့သွားလျှင် Doge က altseason ကိုစတင်သည်။
– BIG DOG (@MoonOverlord) 21ပြီလ 16, 2021
ထိုသို့သောမကြုံစဖူးကာလတိုဈေးနှုန်းပြိုင်ပွဲများကြောင့်အချို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် DOGE စျေးနှုန်းကို altcoin ရာသီအတွက် ဦး ဆောင်ညွှန်ကိန်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
သို့သော်ဤဖြစ်ကောင်းအချို့သောအဓိပ္ပာယ်စေပါဘူး။ နောက်ဆုံးတွင် Dogecoin သည် meme-based အကြွေစေ့တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ရှားမှုမရှိခဲ့ပါ။ သုံးစွဲသူများစွာသည် node အပြည့်ကိုအသုံးပြုကြခြင်းမဟုတ်ပါ။
Dogecoin သည် 2017 ကတည်းကသမိုင်းဝင်ပန့်များ။ ရင်းမြစ် – TradingView
ဒါ့အပြင်လွန်ခဲ့သောလေးနှစ်က Dogecoin အတွက်ခြွင်းချက်တစ်ခုထက်ဈေးနှုန်းရွေ့လျားမှုဟာပုံမှန်မဟုတ်ခဲ့တာကိုသတိပြုပါ။ အပတ်စဉ်ဖျော်ဖြေမှု ၁၆ ခုသည် ၃၀% ထက် ပို၍ မြင့်မားပြီး ၆ ခုသည် ၁၀၀% သို့မဟုတ်ပိုမိုသောအကျိုးအမြတ်များကိုတင်ပြခဲ့သည်။
အဓိက Dogecoin ကိုင်ဆောင်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဒင်္ဂါးအများစုကိုရောင်းလိုက်ရင်ငါ့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအပြည့်အ ၀ ရလိမ့်မယ်။ အလွန်အကျွံအာရုံစူးစိုက်မှု imo တစ်ခုတည်းသောအစစ်အမှန်ပြissueနာဖြစ်ပါတယ်။
– Elon Musk (@elonmusk) ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2021
ယနေ့အထိထိပ်ဆုံးလိပ်စာ ၆၉၃ ခုသည် DOGE စုစုပေါင်း၏ ၇၉.၂% ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤသည်အံ့သြဖွယ်စာရင်းဇယားပင်ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ခဲ့သည် ဝေဖန်မှု Tesla နှင့် SpaceX ၏စီအီးအို Elon Musk မှ ဒါဟာမကြာသေးမီကစျေးနှုန်း spikes ခဲ့မီးမောင်းထိုးပြထိုက်သည် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် Dogecoin ပတ်ပတ်လည်တွင်လည်ပတ်နေသော Musk ၏မှတ်စုများနှင့်တွစ်တာများ။
သို့သော် Dogecoin သည် altcoin ရာသီညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုရန်လူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်စျေးကွက်၏ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှေ့ပြေးသောအချက်အလက်များရှိရမည်။
ဇူလိုင်လ 2020 Dogecoin, USD vs. vs. စုစုပေါင်း altcoin စျေးကွက် ဦး ထုပ်။ ရင်းမြစ်: TradingView
၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် DOGE သည် ၃၆ နာရီမပြည့်မီ ၇၃% အမြတ်တိုးခဲ့သည်။ ၃ ရက်ကျော်ကြာအောင်သက်ရောက်မှုမရှိခဲ့သော်လည်းရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် altcoins များသည်တန်ဖိုးမြင့်တက်လာသည်။ altcoin စျေးကွက်အရင်းအနှီးသည် ၁၀ ရက်အတွင်း ၂၄% တိုးလာသည့်ဒေါ်လာ ၁၀၅ ဘီလီယံမှဒေါ်လာ ၁၃၀ ဘီလီယံသို့မြင့်တက်ခဲ့သည်။
Dogecoin, USD vs. vs. နိုဝင်ဘာ 2020 စုစုပေါင်း altcoin စျေးကွက် ဦး ထုပ်။ ရင်းမြစ်: TradingView
ဤအတောအတွင်း DOGE သည်ကျန်ရှိနေသော altcoins ၏လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားသောအခါနို ၀ င်ဘာ ၂၀၂၀ ရှိစုပ်စက်သည်အခြားပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုပြောပြသည်။ စျေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ဒေါ်လာ ၂၁၀ ဘီလီယံအောက်တွင်တည်ငြိမ်နေသောကြောင့်ထို့အပြင် altcoin ရာသီနောက်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ အစောပိုင်း Dogecoin, USD vs. vs. စုစုပေါင်း altcoin စျေးကွက် ဦး ထုပ်။ ရင်းမြစ်: TradingView
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၂၀၂၁ အစောပိုင်းကာလ ၂ ရက်တာကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ၁၈၂% DOGE pump သည် altseason အချက်ပြခဲ့သည်။ ၃၆ နာရီခန့်အကြာတွင် altcoin market cap ကအစုရှယ်ယာ ၅၀% ကိုဒေါ်လာ ၃၄၀ ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဒီထက်ပိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဒီဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငွေစက္ကူအကြွေစေ့ ၁၀၀၀% ကျော်တက်ခဲ့သည်။ သုံးရက်အကြာတွင် altcoin စျေးကွက်ကန့်သတ်ချက်သည် ၆၀% စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၅၆၀ ဘီလီယံသို့စတင်ခဲ့သည်
Dogecoin သည်အမြင့်ဆုံးသို့မရောက်မှီ ၃ ပတ်ခန့်အလိုတွင် altcoin ချီတက်ပွဲသည်စတင်ခဲ့သောကြောင့်လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုသည်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများကိုပေးလိမ့်မည်။
၂၀၂၁ Dogပြီလတွင် Dogecoin၊ USD противစုစုပေါင်း altcoin စျေးကွက်အထွcap်အထိပ်။ ရင်းမြစ်: TradingView
ထို့ကြောင့်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာငါးခုပန့်များစဉ်းစား, ကျယ်ပြန့် altcoin စုဝေးရှေ့ရှေ့ Dogecoin စုပ်စက်၏သက်သေအထောက်အထားသုံးအပိုင်းအစများရှိခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်စွန့်စားမှုအချိုးအစားသည်စွန့်စားစားကုန်သည်အများစုအတွက်လုံလောက်နိုင်သည်။
ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကသတိပြုသင့်သည် သည်အခြားအဓိက altcoins နှင့်အတူ ငွေစက္ကူအကြွေစေ့သည် alt ရာသီအတွက်ထိရောက်သောညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချရန်မသင့်တော်ပါ။ Dogecoin ကြားတွင်၎င်း၏ကျော်ကြားမှုမှတက်နေထိုင်လျှင် အပြုသဘောခေါင်းစဉ်များတစ်ခုတိုကျခိုကျမှုကို, ထို့နောက် အသစ် $ 0,61 All- အချိန်မြင့်မားသော altcoins များအတွက်အပြုသဘောအရှိန်အဟုန်တစ် presage ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအတောအတွင်းမှ VORTECS ™ဒေတာ Cointelegraph စျေးကွက်များ Pro ကို မကြာသေးမီကစျေးနှုန်းမြင့်တက်မတိုင်မီ, OGပြီလ 29 ရက်နေ့တွင် DOGE အတွက်အသားတင်အလားအလာကိုစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Cointelegraph မှသီးသန့် VORTECS ™ရမှတ်သည်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၊ မကြာသေးမီကစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်တွစ်တာလှုပ်ရှားမှုများအပါအ ၀ င်အချက်များပေါင်းစပ်ခြင်းမှရရှိသောသမိုင်းနှင့်လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေများကို algorithmic နှိုင်းယှဉ်မှုဖြစ်သည်။
VORTECS ™ရမှတ် (အစိမ်းရောင်) နှင့် DOGE စျေးနှုန်း။ ရင်းမြစ် – Cointelegraph စျေးကွက်များ Pro ကို
အထက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း VORTECS ™ရမှတ်သည်Aprilပြီ ၂၉ ရက်တွင်စတင်တက်ခဲ့ပြီးမေလ ၃ ရက်နေ့တွင် ၇၇ သို့မတက်မီ ၇၂ အမြင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ မှတ်သားရန်မှာ ၄၅% မတိုင်မီ ၁၂ နာရီခန့်တွင် VORTECS ™ရမှတ်သည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ $ 0,61 မှာအသစ်တခု All- အချိန်မြင့်မားသောရန်။
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအမြင်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များသည်တစ်ခုတည်းသောအမြင်များဖြစ်သည် စာရေးသူ Cointelegraph ၏အမြင်များကိုသေချာပေါက်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။ တိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုန်သွယ်ပြောင်းရွှေ့အန္တရာယ်ပါဝင်သည်။ သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အခါသင့်ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုသင့်သည်။
Coinbase မှတဆင့်ငွေပေးချေမှုအဖြစ် BTC နှင့် ETH ကိုလက်ခံရန်လေလံကုမ္ပဏီကြီး Sotheby's မှလေလံဆွဲသည်
S&P သည် Bitcoin၊ Ethereum နှင့် 'Crypto Mega Cap' အညွှန်းများကိုထုတ်လွှင့်သည်။ Bitcoin News